Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Cervical Cancer သားအိမ်ဝကင်ဆာ မေးခွန်း
မင်္ဂလာပါ ဆရာရှင့် မေမေ့အတွက် သိချင်တာလေးရှိလို့ မေးခွင့်ပြုပါဆရာ မေမေက သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ အဆင့်၂ ဖြစ်နေတာပါ လွန်ခဲ့တဲ့၁နှစ်ကျော်လောက်ကတည်းက ဆေးသွင်း ဓာတ်ကင်ပြီး ကုသပါတယ်ရှင့် အခုဆေးသွင်းတာ ရပ်ထားတာ ၆လကျော်ခန့်ရှိနေပါပြီ ဒီအတောအတွင်း မေမေက ခါးအရမ်းကိုက်တဲ့ဝေဒနာခံစားနေရပါတယ် ခါးနားမှာလဲ အလုံးလိုစမ်းမိပါတယ်ဆရာ အခုဆေးရုံမှာသွားပြတာ မေမေက ဆီးချိုလည်းရှိတော့ ဆီချိုဌာနမှာအရင်ပြ နေရပါတယ်ဆရာ မေမေခါးနာနေတာက ဘာရောဂါဖြစ်နိုင်တာပါလဲရှင့်။ အရမ်းစိတ်ပူနေလို့ ဆရာ့ကို မေးတာစာရှည်သွားရင် ခွင့်လွှတ်ပါဆရာ
လူနာ အသက် မသိ။ မေးနည်းစည်းကမ်း ပို့လိုက်တယ်။
မေမေက အသက် ၄၅နှစ်ပါဆရာ ဒီနေ့ ဆေးရုံသွားပြီး ပြန်လာတော့ လမ်းလျှောက်လို့မရတော့အောင် နာနေတာကိုကြည့်ပြီး ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သက်သာမယ့်နည်းလမ်းကို ရအောင်ရှာကြည့်ချင်ဇောပဲရှိနေလို့ အမှားပါရင် ခွင့်လွှတ်ပါဆရာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်
2. Cancer of the Uterus သားအိမ်-ကင်ဆာ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/cancer-of-uterus.html
3. Cancers of Women Reproductive system အမျိုးသမီး မျိုးပွါးလမ်းမယ်ဖြစ်တဲ့ ကင်ဆာတွေ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/01/cancers-of-women-reproductive-system.html
4. Cervarix သားအိမ်ကင်ဆာ ကာကွယ်ဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/cervarix.html
5. Cervical Cancer & Virgins သားအိမ်ဝကင်ဆာနဲ့ အပျို http://doctortintswe.blogspot.com/2015/12/cervical-cancer-in-virgins.html
6. Cervical Cancer (1) သားအိမ်ဝကင်ဆာ (၁) http://doctortintswe.blogspot.com/2017/05/cervical-cancer-1.html
7. Cervical Cancer (2) သားအိမ်ဝကင်ဆာ (၂) http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/cervical-cancer-2_24.html
8. Cervical cancer in virgins သားအိမ်ဝကင်ဆာနဲ့ အပျို http://doctortintswe.blogspot.com/2015/12/cervical-cancer-in-virgins.html
9. Cervical Cancer New Guidelines သားအိမ်ဝကင်ဆာ ဆေးစစ်ခြင်း အသစ်ပြဌာန်းချက် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/cervical-cancer-new-guidelines.html
10. Cervical cancer test DIY သားအိမ်ဝကင်ဆာ ကိုယ့်ဖါသာ စမ်းသပ်နည်း http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/cervical-cancer-test-diy.html
11. Cervical intraepithelial neoplasia (CIN) သားအိမ်ဝ ရောဂါတမျိုး http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/cervical-intraepithelial-neoplasia-cin.html
12. Chemotherapy (ခီမို) အတွက် (၁၅) ချက် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/12/chemotherapy.html
13. Gardasil vaccine သားအိမ်အဝကင်ဆာ ကာကွယ်ဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/gardasil-vaccine.html
14. HPV vaccine and Marriage သားအိမ်ကင်ဆာ ကာကွယ်ဆေးနှင့် လက်ထပ်ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/hpv-vaccine-and-marriage.html
15. HPV Vaccine for Ca Cx သားအိမ်အဝ-ကင်ဆာ ကာကွယ်ဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/pregnancy-and-hpv-vaccination_4.html
16. HPV Vaccine for Ca Cx သားအိမ်အဝကင်ဆာ ကာကွယ်ဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/hpv-vaccine-for-ca-cx.html
17. Pregnancy and HPV Vaccination သားအိမ်-ကင်ဆာ ကာကွယ်ဆေး နဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/pregnancy-and-hpv-vaccination_4.html
18. Silent Killer သားအိမ်ဝကင်ဆာ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/12/silent-killer.html
19. Vaccinating against cervical cancer သားအိမ်ဝကင်ဆာကာကွယ်ဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2017/05/vaccinating-against-cervical-cancer.html